PALAUNG NATIONAL SOCIETY - JAPAN: နန်းဝိုးဖန် ထိုးသွားခဲ့တဲ့ အချက်ပေးခေါင်းလောင်း
လူတစ်ယောက် မတရား အလွဲသုံးစား လုပ်သွားတာကို သူ တရားစွဲမိကာမှ ဘယ်နှယ့်လုပ် သူက ခံရရှာသလဲ?
ရုတ်တရက်ကြည့်ရင်တော့ ဒါဟာ မိန်းမပျိုလေးတစ်ယောက် သနားစဖွယ် အမှတ်မထင် သေဆုံး သွားခဲ့တာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ဒီ့ထက်မကတဲ့ သတိထားစရာတွေ ရှိနေတယ်။
သူ့ဆီက လူတစ်ယောက် မတရား အလွဲသုံးစားလုပ်သွားတာကို သူ တရားစွဲမိကာမှ ဘယ်နှယ့်လုပ် သူက ခံရရှာသလဲ?
ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်က လည်သူ စားစတမ်းလား?
ရိုးသားသူတွေအဖို့ ပြဿနာတစ်ခုခုဖြစ်ရင် ဒီလိုပဲ ငုံ့ခံကြရတော့မှာလား?
ဒါကို ထုံးတမ်းစဉ်လာ တစ်ခုလို ဖြစ်မသွားစေချင်ဘူး ဆိုရင် ကျနော်တို့ အားလုံး ဒီကိစ္စကို လေးလေး နက်နက် ၀ိုင်းဝန်းဖို့ လိုမယ်။
ကိုလိုနီခေတ် အကျင့်ဆိုးတွေကို ဖျောက်ဆိုတဲ့စာတမ်းကို ကျနော်တွေ့ဘူးသလိုပဲ။
ဒါပေမဲ့ တကယ်တမ်း အဲဒီလို အကျင့်ဆိုးတွေ ဖျောက်နိုင်ရဲ့လား။
ကိုလိုနီခေတ်တုန်းက ပုလိပ်ဆိုတာတော့ အတော်ဆိုးတာပဲ။ ဂွင်ဖန် လိုက်တာကလည်း နူရာဝဲစွဲ လဲရာ ပုလိပ်ထောင်းခဲ့တယ်။
“တရားလိုဖြစ်တဲ့ မနန်းဝိုးဖန်ကို ဘာလို့ တနေကုန်၊ တညလုံး စစ်ရသလဲ။ တရားလိုကို တရားခံလို ဘာကြောင့် စစ်တာလဲ။ ဒါတွေ မေးခွန်းထုတ်စရာတွေပဲ” ဟု ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် တဦးက ပြောသည်။ ဆိုတဲ့စာသား တစ်ခုကို သတင်း တစ်ပုဒ်ဆီမှာ ဖတ်ရတယ်။
ကျနော်တို့လည်း အဲဒီ မေးခွန်းကို ရိုးသားစွာ သိချင်မိပါတယ်။
ဒီလို သနားကမား ကောင်မလေး တစ်ယောက်ကို တစ်ညလုံး စစ်လို့ရသလား?
ဒီမိုကရေစီ ဆိုတဲ့ နိုင်ငံတော်ကြီးမှာ ဒါမျိုးကို ခွင့်ပြုထားပါသလား?
ဒီကိစ္စကြောင့် အဲဒီတုန်းက စစ်တဲ့ ဒုရဲအုပ် အလုပ်ပြုတ်သွားမယ်။
ဒီလောက်နဲ့ ပြီးသွားမှာကို မြင်နေတယ်။
အပြစ်အားလုံး အဲဒီ ရဲအုပ်အပေါ် ပုံချလိုက်လိမ့်မယ်။
တကယ်ဖြစ်သင့်တာက အတွင်းလှိုက်စားနေတဲ့ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းရမှာ ...
ဒီလိုလုပ်ရပ်မျိုးတွေ နောက်ထပ်မဖြစ်အောင်၊ အားနည်းတဲ့ ပြည်သူတွေအပေါ် မတရားအနိုင်ကျင့်တာမျိုး မဖြစ်အောင် တားဆီးရမှာ။
နိုင်ငံတကာမှာတော့ ဒီလိုဖြစ်ရပ်မျိုး ဖြစ်လာရင် ဟိုးထိပ်ဆုံး ၀န်ကြီးကစပြီး နှုတ်ထွက်ရတာမျိုး တွေ့ကြုံ မှတ်သားဘူးပါတယ်။
အဲဒီလောက်ထိ ကျနော် တောင်းဆိုလိုခြင်း မဟုတ်ပါ။
ဒါပေမဲ့ ပွဲပြီးမီးသေဖြစ်သွားမှာတော့ မကြိုက်ရိုး အမှန်ပါ။
နောက်ထပ် အပြစ်မဲ့ ပြည်သူတွေ အနှိပ်စက် မခံရအောင် ထိထိရောက်ရောက် ကိုင်တွယ်သင့်တယ်။
တကယ်တော့ ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာ (ဒီမိုကရေစီ စနစ် စစ်စစ်မှာ) အာဏာဆိုတာ ပြည်သူက နှင်းအပ် ထားတာပါ။ ပြည်သူက ယုံကြည်စိတ်ချအောင် တနည်းပြောရရင် ပြည်သူ နောက်ကျော လုံအောင်
အာဏာပိုင်တွေက နေထိုင် ပြသင့်တယ်။ ပြည်သူက ကျီးလန့်စာစားဘ၀နဲ့ တထိတ် လန့်လန့်နေရရင် ဒါ အာဏာရှင် အုပ်ချုပ်ရေးပဲ ဖြစ်လိမ့်မယ်။
အခုကာလ ပြည်သူတွေဟာ အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကို တကယ်တမ်း အားကိုးဝံ့ပါပြီလား။
ရုံးပြင် ကနားရောက်ရမှာကို ကျနော်တို့ မြန်မာတွေ တော်တော် ကြောက်တတ်ကြပါတယ်။
အချိန်ကုန်တယ်။ လူပန်းတယ်။ ထိုင်နေ အကောင်းသွား ထလိုက်မှ ဆေးအတွက်လေး ဆိုသလိုဖြစ်ရမယ် ဆိုတာမျိုးတွေ ကျနော်တို့အားလုံးရဲ့ ရင်ထဲမှာ ရှိကြပါတယ်။
ဒါဘယ်သူ့ကြောင့်ပါလဲ။ ဘယ်သူတွေက ချွတ်ယွင်းအားနည်းနေလို့လဲ။
တနည်းအားဖြင့်ကြည့်ရင်တော့ နန်းဝိုးဖန်ရဲ့ ဖြစ်ရပ်ဟာ အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့ ပြည်သူ့ ယုံကြည်မှုကို ရယူနိုင်စရာ အခွင့်အလမ်းလို့လည်း ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါကို ထိထိရောက်ရောက် ကိုင်တွယ်ပြခဲ့ရင် ပွင့်လင်း မြင်သာမှု အပြည့်နဲ့ြ့ပည်သူတွေဆီ ချပြခဲ့ရင် သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူတွေကလည်း ဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာ နှုတ်ထွက်တာမျိုးလုပ်ပြခဲ့ရင် ပြည်သူ့ယုံကြည်မှုကို တမုဟုတ်ချင်း ရကြမှာပါ။ ကျနော်တို့မြန်မာတွေက ခွင့်လွှတ်လွယ်တတ်ကြပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အခုတော့ ကျနော်တို့ မျှော်လင့်တာနဲ့ ဆင့်ကျင်ဘက်။
ငါ့ညီရေးရင် ငါ့ညီမှာ အန္တရာယ်ရှိမယ်။ ငါ့ညီတင် မကဘူး ငါ့ညီ အဖွဲ့အစည်းမှာပါ အန္တရာယ်ရှိမယ် .... လို့ သတင်းထောက် တစ်ယောက်ကို ခြိမ်းခြောက်ကြောင်း ကြားရတော့ ဒါ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတဲ့လားလို့ပဲ အော်မေးချင် မိတော့တယ်။
ကျနော့်ဆန္ဒကတော့ ဒီကိစ္စကို ပြီးလွယ်ပျောက်လွယ်ဖြစ်မသွားစေချင်ပါ။
ဟို အလွဲသုံးစားလုပ်သွားတယ်ဆိုတဲ့လူကိုလည်း လွတ်မသွားစေချင်ပါ။
အားနက်ဟဲမင်းဝေးရဲ့ နာမည်ကြီး ၀တ္ထုတစ်အုပ်ကို မူတည်ပြီး စကားတစ်ခွန်းကြားဘူးပါတယ်။
ခေါင်းလောင်းထိုးသံတစ်ခုကြားတဲ့အခါ ဘယ်သူ့အတွက် ထိုးတာလဲလို့ မေးမနေပါနဲ့
အသက်၁၉နှစ်သာ ရှိသေးရှာသူ ရှမ်းမကလေးဟာ
ညကြီး အချိန်မတော် အစစ်ဆေး ခံရရင်း သေဆုံးသွားခဲ့ရှာပါပြီ။
Thorn Nay Soe သွန်းနေစိုး
facebook မျ ထပ်ဆင့်မျှဝေခဲ့ခြင်ူးဖြစ်ပါတယ်။
Posted by PNSjapan at 3:00 PM